Taageereyaasha Real Madrid oo helay qaab fudud oo ay ugu dalxiisaan Bernabeu – Gool FM
Taageereyaasha Real Madrid oo helay qaab fudud oo ay ugu dalxiisaan Bernabeu
Kaafi January 3, 2018
(Madrid) 03 Jan 2017. Taageereyaasha Real Madrid dhawaan waxaa u suurtagali doonta in ay safarada rasmiga ah ee ay ku imaanayaan Santiago Bernabeu tikidhada uga soo iibsadaan Bitcoin.
Meesha kale oo diiradda saaran waa Atletico Madrid.
Shirkadda fadhigeedu yahay Murcia ee loo yaqaan 13-ka tikidh waxa ay shaacin doontaa 18ka Janaayo in ay hawsha bilaabi doonto waxa ayna socon doontaa ilaa iyo 1-da Febraayo iyaga oo ka faa’ideysanaya shacbiyadda ay abuureyso Bitcoin, oo ah adeeg lagu bixiyo lacagta si digital ah.
13 tikidh waxa ay u fududeyn doontaa dalxiiseyaasha in ay dhaq dhaqaaqyo kala duwan uga sameeyaa Spain iyada oo adeesanaya Bitcoin.
Real Madrid oo kaliya ma aha kooxaha muujiyey sida ay u daneenayaan. 13-ka tikidh waxa ay wadahadalo meel fiican maraya kula jirtaa Atletico Madrid taas oo u ogolaan doonta taageereyaasha in ay safari ku soo bixiyaan Wanda Metropolitano iyaga oo isticmaalaya.
Real Madrid oo ku qancineysa Ronaldo mushaar le'eg inta ay Messi iyo Neymar qaataan....Waa misa ayaad is leedahay?
Real Madrid oo is raacineysa €150 million iyo Gareth Bale si ay u hesho xiddiggan ka dheela Premier League-ga....ogow ma aha Hazard